Fitantanana Andrimpanjakana: mila fahaiza-manao sy traikefa ny ho filohan’ny Antenimiera | NewsMada
Fitantanana Andrimpanjakana: mila fahaiza-manao sy traikefa ny ho filohan’ny Antenimiera
Tsy mandeha ho azy amin’izao na olonolom-poana. Misy anarana maromaro voatonona hiandraikitra ny toeran’ny filohan’ny Antenimierampirenena, hivory ny talata ho avy izao hifidy io filoha io sy hametraka ny vaomiera isan-tokony.
Mila olona mamaly tsara ny asa iantsorohan’ny Antenimierampirenena, amin’ny fandinihana sy ny fandaniana lalàna, ny fanaraha-maso ny asan’ny governemanta sy ny fanaovana tombana ny politika fampandrosoana izany. Mitaky filoha tena vonona amin’izany raha te handray anjara feno amin’ny fampandrosoana ny firenena ny Antenimierampirenena. Sarotra anefa ny hahitana izany, saingy misy iray amin’ireo anarana voizina amin’izao fotoana ireo tena manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ho amin’izany. Mila olona nanaraka fianarana avo lenta ho fitandroana toy ny anakandriamaso ny tombontsoan’ny mpifidy, ny an’ny mpandraharaha sy ny an’ny fanjakana, amin’ny alalàn’ny fandinihana sy ny fandaniana ny lalàna ny fitantanana ny Antenimierampirenena. Noho izany, anisan’ny ilain’ny filohan’ity andrimpanjakana ity ny fahaizana sy traikefa momba ny fifandraisana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, ny volam-panjakana sy ny lalàna. Marihina fa anisan’ny fitaovana ara-bola ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny lalàna momba ny tetibolam-panjakana. Tsy handroso ny firenena raha tsy mahay ny pitsopitsony sy ny tokony hovana sy hampivoarana momba io ny filohan’ny Antenimierampirenena.
Mahalala ny olana…
Ilain’ny ho filohan’ny Antenimierampirenena ihany koa ny traikefa matanjaka eo amin’ny sehatra tsy miankina. Mamorona harena sy asa ity sehatra ity ary fanoitra iadiana amin’ny fahantrana. Hijanona ho firenena mahantra hatrany i Madagasikara raha tsy mamaly ny filàny sy ny fampandrosoana azy ny lalàna. Ilana filohan’ny Antenimierampirenena mahalala tsara ny olana sy ny azo trandrahina eo amin’ny sehatra tsy miankina. Ary manoloana ny Vinan’ny fitondrana, mifototra amin’ny IEM, anisan’ny laharam-pahamehana ny angovo azo havaozina. Tokony hanana fijery mifanaraka amin’izany ny filohan’ny Antenimiera hanaovana lalàna mifanaraka amin’ny fampandrosoana io sehatra io. Anisan’izany ny etona azo avy amin’ny fanodinana ny fary, ny angovo azo avy amin’ny masoandro…
Sehatra mandray anjara betsaka amin’ny fampandrosoana sehatra maro hafa ny angovo: indostria, harena an-kibon’ny tany, fambolena sy fiompiana, varotra, fampianarana… Rafitra ipetrahan’ireo asa marolafy efa eo am-panatanterahana azy ny politika vaovaon’ny angovo novolavolaina nanomboka tamin’ny 2014 ary ampiharina amin’izao fotoana izao. Raha tsorina, afaka ny hanatsara ny endriny sy handray anjara feno amin’ny fampandrosoana ny Antenimierampirenena, raha manana filoha maharaka tsara ny zava-misy eo amin’ny sosialy sy toekarena misy eto amin’ny firenena.